Shirka abaaraha ee Nairobi - BBC News Somali
Shirka abaaraha ee Nairobi
9 Sebtembar 2011
Image caption Shirka abaaraha looga hadlayo ee magaalada Nairobi
Siyaasiyiinta geeska Afrika iyo hey'adaha bini'aadanimada ayaa maalintii labaad shir uga socdaa magaalada Nairobi si ay uga doodaan qaabkii wax looga qaban lahaa abaaraha saameeyay in ka badan 12 milyan oo qof.
Madaxda gobolka ee shirka ka qeybgalaya waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed oo sida uu ku warramayo weriyaha BBC Maxamuud Cali sheegay in aqoon darrada ka jirta Soomaaliya ay qeyb ka tahay dhibaatada.
Raiisul Wasaaraha Ethiopia, Meles Zenawi, ayaa ku baaqay in goobaha la marsiinayo gargaarka bini'aadanimo ee Soomaaliya in ay difaacaan ciidamada nabad ilaalinta ee Africa, si ay u gaarto dadka ay abaarta iyo macluushu saameysay ee ku sugan goobaha ay mucaaradku agacnta ku hayaan.
Isagoo ka hadlayay shirka Kenya ee dhibaatada abaarta looga hadlayo, ayaa Meles waxa uu sheegay in hey'adaha samafalku ay wx wanaagsan qabteen, gargaarkana socda, laakiin loo baahan yahay in wax badan la qabto.
Soomaaliya oo ah waddanka ay sida ba'an ugu dhifatay abaartu, Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in 750 kun oo qof ay ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macluul dhawrka bilood ee soo socda.
Maqal Ramadaanka iyo ciyaaraha kubada cagta
Ramadaanka iyo ciyaaraha kubada cagta
Maqal khasaare naf iyo maalba leh oo duufanta u geysatay Somaliland
khasaare naf iyo maalba leh oo duufanta u geysatay Somaliland
Maqal Khilaafka arrimaha qoyska oo ku soo badanaya deegaanka Godey
Khilaafka arrimaha qoyska oo ku soo badanaya deegaanka Godey
Maqal Madaxweynihi hore ee Soomaaliya oo ka qeyb galay madasha hoggaamiyeyaasha Afrika ee ka dhacayTanzania
Madaxweynihi hore ee Soomaaliya oo ka qeyb galay madasha hoggaamiyeyaasha Afrika ee ka dhacayTanzania
Maqal Muxuu soo kordhin karaa kulanka madaxda Islaamka ee Turkiga?
Muxuu soo kordhin karaa kulanka madaxda Islaamka ee Turkiga?
Maqal Madaxweynihi hore ee Soomaaliya oo ka qeyb galay madasha madaxda Afrika ee ka dhacayTanzania
Madaxweynihi hore ee Soomaaliya oo ka qeyb galay madasha madaxda Afrika ee ka dhacayTanzania